Sakramenta hono ny fanambadiana ka tsy azo ravaina.
Date: 13 septembre 2017 - 15:52
VHV aho. Ho anareo katolika no tena ametrahako fanotaniana. Nanambady vita mariazy katolika aho (Za protestanta). Valo taona nivadiana, fa hitako avokoa ny probleme rehetra kely sy lehibe amin'ny tokatranoko. Tena kalvary, ary manapakevitra ny hisaraka ho. Ny vadiko tsy mety fa sakramenta hono ny fanambadiana katolika fa tsy mitovy protestant, ka tsy azo ravaina fa mety ho very hatramin'ny fanahy any amin'ny afobe.
Tena marina ve zany?
Re: Sakramenta hono ny fanambadiana ka tsy azo ravaina.
Date: 13 septembre 2017 - 15:55
Salama ianao irery
Fa tena marina io voalazanao io ka
Date: 13 septembre 2017 - 16:24
Sakramenta tokoa ny mariazy ho an' ny katolika , ka tsy azo ravana satria rohy mandra-maty.Saingy tsy marina kosa ilay hoe tsy mahazo misaraka. Afaka misaraka ,saingy tsy mahazo manambady fanindroany any am-piangonana .
Par: ze aiiiko
Date: 14 septembre 2017 - 08:53
Fijangajangana ihany o azo ekena ara-baiboly ny fisarahana
na izany ary tsy tokony isarak ny mpivady f masina loatra ny fanambadiana
Par: recopiez le code
Date: 14 septembre 2017 - 15:45
resaka fotsiny izany sacrement sy sakramenta izany e :
aiza ve ka sacrement izy nefa azo atao ny misaraka raha tratra mijangajanga ny iray ?
sacrement ny batemy satria : rehefa vita ianao dia an' Kristy foana mandrapahafaty fa tsy hoe lasa slamo tampoka raha ohatra ka mijangajanga na mihinana paraky.
ny atoroko anareo dia rehefa tena tsy zaka dia mialà fa sao hanaraka hatramin'ny aina fa iomehezan'ny olona fotsiny raha matimaty foana eo an !
rakotomandimby sy rikalajefitra efa mananontanona mantsy !
Par: Saisissez le code
Date: 14 septembre 2017 - 15:58
Nitsangana t@ maty i recopiez le code
Date: 14 septembre 2017 - 16:57
Zavatra 2 no resahana eto:
1- NY FISARAHANA : ny misara-toerana moa afaka atao foana : rehefa tsy zaka, rehefa matahotra afaka miala foana (fa tandremo sao dia ianao indray no voan' ny "abandon de domicile conjugal" raha mampiditra divorce ny iray). Ny divorce indray dia ara-panjakana , fa tsy misy ifandraisana @ mariazy tany am-piangonana! Raha vita ny divorce, ny rohy ara-panjakana no tapaka fa ny sakramenta mbola mitombina.
2- Ny sakramenta: Ara-panjakana, afaka manambady indray ilay olona divorcé, saingy ho an' ny fiangonana katolika mbola manambady izy, ka tsy afaka entiny any am-piangonana hamasinina ny mariaziny.
Par: Andao hiova
Date: 14 septembre 2017 - 17:49
Rah ny baiboly no vakiana dia tsy mety ny misarabady satria :
- Izay natambatr' Atra hoy Jesosy dia tsy azon' olb sarahina. Ianao olb io ao anatin'izany toy izany koa ny vadinao.
-Rah misy misaraka @ vadiny ka manambady hafa dia mpijangajanga izy eo imason'Atra na dia hivvk iskalahady na isakasabotsy.Matio 5/32
- Raha noho ny fijangajangan'ny iray kosa no nahatonga ny iray hisaraka dia eken'ny baiboly ny fisarahany saingy tsy mahazo manambady intsony izy mandrapah tsy eto antany ilay iray. Vakio romana toko faha 7/2.
Raha fehezina izany dia izao tsy azo atao ny misarampanambadiana fa anjatranao ny mitondra ambvk izay olana misy ao dia minoa fa hiasa hanova izany Atra.
Date: 14 septembre 2017 - 18:21
Tena liana be amin"izany tantaranareo izany ,tsy izany mantsy fa izahako koa dia katolika ary ny vadiko protestante ,telopolo taona izao no nivadianay ,fa mbola mitana hatramin"izao ,ary ny fatratra dia nivadika katolika koa ny vadiko ,izay zanaka protestant hiringiriny .Raha tsy mahadiso ,inona loatra re izany kalvary tonga hatrany amin'ny fisarahana izany .
Par: Mila dinihana lalina
Date: 15 septembre 2017 - 05:01
Tsy mety tokoa misarabady sauf hoe adultère,
Ny amin'ny fijangajangana tsy azo atao ho isan'ny zavatra tsy mampaninona, tahaka ny ota samy hafa
Ny manam-bady nefa mijangajanga manenjika vehivavy atsy sy aroa na tsy manambady nefa manenjika vehivavy atsy sy aroa dia samy ratsy
Aoka ny olona rehetra samy handeha araka izay anjarany nomen'ny Tompo azy sy araka ny niantsoan'Andriamanitra azy avy.
misy teny koa ao KORINTIANA VOALOHANY 7 ao Hoe : "Fa hoy izaho amin'ny tsy manam-bady sy ny mpitondratena kosa : Tsara aminy raha mitoetra tahaka ahy izy.Nefa raha tsy maharitra izy, dia aoka hanam-bady ihany; fa tsara ny manam-bady noho ny ho maimay.
Fa raha ny tsy mino no miala, aoka hiala izy. Na rahalahy na anabavy dia tsy voafehy amin'izany; fa Andriamanitra efa niantso antsika amin'ny fihavanana
Par: mila fanazavana bebe kokoa
Date: 15 septembre 2017 - 10:34
Andao hiova>>> tena marina v izany oe na dia nisaraka noho ny fijangajangan'ny iray aza ka manambady olokafa nef mbola velona io vadinao taloha nijangajanga io d mijangajanga ze manambady hafa?????
Ohatra : nanambady an'i X za, Y no anarako, i X nijangajanga dia nangatak divorce za nef X mbola velona any, zao anef d ef manambady olokafa aho, di mbola mijangajanga foana v za @zan rah mbola velona X vadiko taloha?
Date: 18 septembre 2017 - 18:07
Mila fanazavana bb kokoa>> Jereo ny Romana 7/2 io dia vakio tsara. Raha vadin'i X ianao dia fehjezin'ny lalana ho ani X ianao. Tsy afaka @ io lalàna mifehy anao ho an'i X io ianao rah tsy maty i X. Rah nijangajanga i x ka tsy tantinaoi dia omen'ny baiboly alalana hisaraka aminy ianao ka amin'izay dia tsy tompn'andraikitra ianao ny @ X, Atra anefa mbola tsy nanakosoka ny lalàna mamatotra anareo 2 fa tsy maty mihintsy io fatorana io rah tsy efa maty ny iray aminareo. Rom 7/3Rah mbola velona ny lahy ka manambady olona hafa ravehivavy dia mpijanga2, fa rah maty kosa ny lahy dia afaka @ izany lalàna izany izy ....
Par: athée iringiriny
Date: 18 septembre 2017 - 19:04
Date: 19 septembre 2017 - 07:16
Date: 19 septembre 2017 - 08:27
Alohan'ny zavatra rehetra dia farito aloha ny atao hoe sakramenta. Rehefa azonao tsara io dia voavaly ho azy ny ahiahinao rehetra.
Tsy misy idiran'ny maha-protestanta na katolika ny fisarahana fa rehefa kalvary ilay izy dia anjaranao no manapa-kevitra na hi-sauvé vie (ianao sy ny zanakao) na hijery fotsiny ilay fiainana mirona mankany amin'ny fahafatesana.
Date: 19 septembre 2017 - 11:17
ny sakramenta raha ho faritana dia fitambarana teny roa :
- ny sakra ary ny menta
ny sakra dia ilay hoe "mi - sacr"
ary ny menta dia ilay hoe "manta "
noho izany ny sakramenta dia ilazana ny fomban'ireo ireo olona "mpi - sacr manta amin'izao" !!!!!
Par: hamafiso ny finoana
Date: 19 septembre 2017 - 17:14
Eny Sakramenta ny mariazy Katolika.
Raha marary ara-batana ny vadinao, ndeha ataontsika hoe voan'ny cancer sanatria na lasa malemy etc., dia tsy maninona raha hisarahanao ve ? Dia ahoana raha marary saina na marary fanahy ? Marary fanahy izany mety hoe lasa manao toetra ratsy ohatra, na lasa tsy mivavaka etc.
Ny fanambadiana dia tena fiainam-panahy lalina. Samy voakasik'io na Katolika na Protestant. Ny mahavoa ny olona matetika dia manambadimbady foana fa tsy mieritreritra izay hoe fiainam-panahy izay ny fanambadiana. Maro be ireo maomana fety fotsiny fa tsy manome lanja ny fiofanana sy ny fiomanana ara-panahy (Ny ankabeazany vita amin'ny resaka tapak'andro any @ Pasitera). Avy eo indray rehefa tojo olana matetika dia mitsaoka (misaraka) no mahamaika fa mbola tonga saina amin'ilay fiainam-panahy foana : Mba mitady an'Andriamanitra ary mitondra ny fijaliana miaraka Aminy. Ny toe-tsain'ny olona amin'izao koa moa dia oe fiainana fohy ka sao lany hijaliana etc. Fa ny any an-koatra lava be nefa ny fiainana an.
Hatanjaho ny finoana, na Katolika ianao na Protestant, dia mahereza mivavaka fa tena mahery ny vavaky ny vady ; ary tsy misy manana fitiavana lehibe noho izay mahafoy ny ainy ho an'ilay tiany hono.
Date: 20 septembre 2017 - 09:52
Marina ny tenin’i Andao hiova fa ampiko kely. Ny fanambadiana koa dia mifandray @ virginité araka ny nanaovan’A/tra azy. Voalaza ao @ Deo 22/25 fa izay mamaky tsy maintsy manambady izay novakiana. Ary tsy azony sarahana mandritra ny andro-piainany. Izay vhv tsy vierge manambady dia vonoina ho faty. Rehefa tonga i Jesosy dia tsy misy intsony ny fanamelohana ho faty fa hoy izy « na iza na iza misaotra ny vadiny afa-tsy nohon’ny @ fijangajangana ihany dia mampijangajanga ary izay manambady izay voasaotra dia mijangajanga ». Fahotana zany ny manambady indray raha misaraka sy manambady izay olona nosarahan’ny vadiny. Ilay hoe afa-tsy nohon’ny fijangajangana dia nohon’ny fahaloton’ilay vehivavy nampakarina izay tokony ho vadin’izay namaky azy. Satria voafitaka ilay lehilahy ka raha sarahany ilay vehivavy vao nampakariny dia azony atao ny mbola manambady indray. Fantany mialoha moa zany ka mbola mijanona @ilay vhv izy dia azy sy A/tra izany.
Nohon’ny tsy fahalalantsika sy vanim-potaoana mandroso ary ny tsy fanaharahana 100% sy ny tsy fandihinana lalina ny baiboly dia izay vita soratra any @ commune no mpivady @ntsika nefa tsy izay no izy fa mpamaky sy novakiana afa-tsy ny fahafatesan’iray @ ireo ihany vao atao hoe mpivady @A/tra. Ka raha tiana ny ho vaovonjy dia tsara raha mitoetra @ zao raha namaky na novakiana nefa tsy lasa mpivady nefa samy mbola velona. Io ilay voalazan’i Jesosy hoe « misy ny ionoka (tsy manambady) nohon’ny tenin’A/tra ».
Date: 20 septembre 2017 - 14:31
Liva-Sitraka >>> Nisy vehivavy samaritana iny teo am-patsakàna nihaona tamin'ny mpamonjy ary nifampiresaka tamiNY nandritra ny fotoana tsy nahateo ny mpianatra...
Rehefa voavakinao tsara ny tantàra dia efa nanambady in-dimy ravehivavy, nefa na izany aza tsy nanameloka azy ny amin'izany ny Mpamonjy fa nanoro azy ny tena "ranovelona" fotsiny ihany (mba tsy hangetaheta no resaka teo) fa ho anao 'zao dia mangetaheta fanafàhana amin'ilay zioga nentina ianao.
Ny ranovelona dia io baiboly io ihany, misy fomba lazaiNY ao hanananao tokantrano voatahy saingy ilaiNY ianao "hanovo" (hamaky sy hihaino) azy, mba tsy ho tafalatsaka anaty fahdisoana tahaka izao.
Marefo be ny finoanao ka lasa gejain'ilay "doctrine" ny fahafàhanao, aza mitoetra amin'ny tsy fahalalàna fa "...raha ny zanaka (Soratra Masina) no manafaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo".
Date: 23 septembre 2017 - 18:34
Fa nareo vé Mbola eo ambanin'ny lalana sa ambany fahasoavana e? Ny fijangajangana ihany no ota mihatra @ tena, nefa i Jesoa tokoa aza tsy nitora-bato ilay vhv tratra nijangajanga
Tsy sacré intsony ny sacrement rehefa voaloto, tapaka ny contrat
Date: 24 septembre 2017 - 23:30
De hirahirao ilay hira hoe Sacrifice ary e!! efa ho faty koa hoe sakramenta ahoana ?? !! mamonoa tena dia ho lasa maritiora . Tsy ho lasa Vicoitre Rasoamanarivo mihintsy raha maty ao an!
Masina ny fanambadiana , marina izany , fa raha misy agression verbale isan'andro na physique , dia midika inona ?? fanambadiana izany sa fanambaniana , sa fana....??EFA tsy misy fanasiana vidiny sy valeur an'ilay fanambadiana intsony ka inona no mbola hikirikiriana hijanonana ao , raha tsy hoe misy diamondra sy saphir niarahana nilomanosana angaha dia hoe sarotra ny fizarana .
Ereto raha zaka ialao rehefa tsy zaka , fa ny misavoritaka lava izany ,manafohy andro fotsiny , jereo ny gazety firy isan'andro ny olona manambady mbola tanora maty ao , ankoatry ny tsy mivoaka gazety . Ankafizo ny lafitsaran'ny fiainana f'aza miharitra ny maizina raha mbola velona , fohy anie ny andro iainana e
Par: hafahafa ihany
Date: 25 septembre 2017 - 16:43
Mahatalanjona ihany raha toa ka ny "Kristiana" no voalohany manohitra tokony hiaretana ao amin'ny fanambadiana Kristiana. Ny Jesoa arahin'ny Kristiana nefa dia nitondra hazofijaliana ary novonoina mihitsy. Nampianatra fa izay te hamonjy no tenany no hahavery azy.
Vao mainka mahakivy raha ireo mitono-tena matetika fa "ambany fahasoavana" no voalohany tsy mino io Fahasoavana io akory fa dia mandroso hevitra amin'ny fisaraham-panambadiana.
Par: Hono oa
Date: 25 septembre 2017 - 19:51
Hafahafa ihany> tokony hiaretana vé izany ny fijangajangana aminao
Date: 25 septembre 2017 - 22:26
Mamporisika daholo ny ankamaroantsika. Tsy hay akory ilay voalaza fa "kalvary" iainan'ilay olona. Aza mamarina an-kady olona lehiretsy a.
Hamaly ny fanontaniany aho :
Ho an'ny Katolika dia isan'ireo Sakramenta ny Fanambadiana ary tsy azo ravaina. (Izay natambatr'Andriamanitra aoka tsy ho sarahin'Olombelona). Toa ny lamban'akoho ny fifankatiavan'ny mpivady ka aina no fetra.
Raha toa ka misy ny fisarahana eo amin'ireo mpivady izay nandray ny sakramentan'ny Fanambadiana eo anivon'ny Fiangonanana Katolika dia tsisy fika intsony raha miverina manambady ka mitetateta hanao mariazy.
Rehefa tia dia tia hatramin'ny farany. Angaha i Jesoa nametraka fepetra tamin-tsika tamin'ny fanehoam-pitiavana izay nataony ? Raha Kristianina, mahaiza miharitra ny fijaliana. Atambaro amin'ny fijalian'i Jesoa Kristy izany dia ho hitanao ny vokany.
Date: 26 septembre 2017 - 08:16
Ka raha ny fiainan'ny jiosy taloha anie tsy nisy izany sakramenta fanambadiana izany. Jereo i Jakoba : nampirafesiny aloha ny vadiny mirahavavy, dia niterahany koa ny mpanompovavy 2 (sy izay tsy fantatra tany!). Miharitra foana ianao ra-vehivavy, tsy mahazo misaraka izany, ny lhl maka vhv maro tsy mijangajanga!!!
Date: 26 septembre 2017 - 11:11
Hono hoa >>> Mila miaritra miaraka amin'i Jesoa. Ny fiainantsika Kristiana tsy hoe lasa fiainana tsy misy olana na hoe lasa mora vahana daholo ny olana. Ny fiainantsika dia hoe na eo aza ny olana dia eo ihany koa Izy Andriamanitra mankahery antsika isan'andro. Anjarantsika ny mampifandray ny olana atrehina amin'ny fiainam-panahy.
Hiaretana ve ny fijangajangana : I Jesoa nalaina baraka, nororaina etc. Tena mahatsiaro ireo isika rehefa misy fampirafesana ao an-tokatrano : Mahatsiaro afa-baraka, mahatsiaro natao tsinontsinona, mahatsiaro hoe tena nororaina sy nohitsahina tanteraka. Fa isika raha te hanaraka Azy dia mila miaritra an'izay ihany koa. Tsy hoe miaritra dia miraviravy tanana fotsiny eo nefa isika. Fa miaritra amim-bavaka. Dia mahereza fa tsy misy very maina ny vavaka atao.
Izaho tsy miteny hoe moramora. Fa hitako hoe hafahafa raha isika Kristiana tsy mba hifankahery hamonjy ny fanambadiana na eo aza ny maha-olombelona antsika rehetra fa dia handrisika fotsiny hoe "Aza miaritra fa fiainana foy sy fandalovana ity", na hoe "Foy andro hiainana eo." Ny tena fiainana katsahin'ny Kristiana nefa hono hoe tsy ny hiaina 120 taona ety an-tany fa hiaina mandrakizay eo anilaNY.
Date: 26 septembre 2017 - 11:15
hafahafa ihany >> Misaotra indrindra amin"izany teninao izany, mbola manamafy izao fanehoan-kevitra izao fa tsara aro ny fiainana rehefa ankinina amin'i Jesosy. Amen
Date: 26 septembre 2017 - 13:47
Ho anareo vehivavy: hajao ny vadinareo; lehilahy izy, tsy maintsy mitady vhv any ivelany! Ianao tsy mahazo mijery na iza na iza (raha vao fohifohy ny akanjo na tsara tsara ny lokomena dia karazan' ny mijangajanga!). Azony atao ny misao-bady rehefa tsy miteraka ianao na rehefa mahita ny tanora kokoa. Fa ianao vhv mahareta, mandefera, ento am-bavaka! I Jesosy miahy anao hatrany!!
Izay no hafatra entin'ity forum ity ho anao!!!!
Raha jereko mantsy ny eto, ny hafatra eto tsy hoe : aza mijangajanga, aza mampijaly vady ; fa hoe: mahareta, mandefera, mifikira ao @ fanambadiana na inona na inona manjoa anao ao!
Date: 26 septembre 2017 - 15:17
Tsy Aldo vé izay voasoratra anaty baiboly ihany no arahina e!! Ny resaka fijangajangana dia voalaza ao fa tsy mitovy @ ota rehetra izay ivelan'ny tena fa ota mihatra @ tena.
Ny tena tokony hifantohana koa angamba dia ny fototry ny fanambadiana tena araky ny baikon'Atra, raha eo am-boalohany dia efa tsy arak'izay dia mazava ho azy fa tsy arak'izay koa ny ambiny rehetra aty aoriana
Date: 26 septembre 2017 - 22:52
Ary mampme mihintsy ny eto amin'it forum ity . Fanambadiana no resahina , fa hitovy amin'iJesosy izay efa voahosotr'Antra ho zanany ve izany ilay lahy na vavy mijaly anaty fanambadiana e. Jesosy anie ka tsy nahafantatra izany hoe fanambadiana akory e!! nY fahotantsika mianankavy no nentiny teo @ lakroa , fa tsy hoe jesosy aza nizaka ny hazofijaliana ko zaho koa ve tsy mba hiaritra ny fijaliako !!!! de gaga ny tenanay raha mahita olona maty ho azy anaty tokatrano . JESOSY efa izay no nanoritan'Andtriamanitra ny destin-ny , fa ianao nomena saina handinika sy fo ve raha zanak'Andriamanitra marina ianao , maninona no manaiky ho viravirain'ny devoly amin'ny fampijaliana sy ny famoretana ??? satria ve mitovy ianareo sy Jesosy ?? Mba mandiniha fa dia ho fatifaty foana !!
Date: 27 septembre 2017 - 15:43
aza misaraka izany.
Par: pretty girl
Date: 18 octobre 2017 - 13:35
Zao aloha an, ny ankamaroan'ny olona manambady dia mijoboka, hitanao daholo hoy ianao ny olàna rehetra na ny kely na ny lehibe, fa ny tokatranon'olona angaha tsy misy olàna, tsotra io, mivavaha, mivavaha, mivavaha. Ny hoe mivavaka dia tsy lay alohan'ny sakafo, na alohan'ny hatory, fa mitolona am-bavaka. Izay no adidinao fa Andriamanitra tena mihaino izay tena mitaraina Aminy, ka ento Aminy ny olànao fa raha eto mbola fisainan'olombelona ihany, Izy hanoro làlana anao, mahereza, ny Tompo homba anao
Date: 19 octobre 2017 - 08:09
Liva sitraka > mitovy cas isika roa
izao no hevitro, ny tokatrano tsy natao hijaliana fa rehefa tafahoatra ny fijaliana dia afaka miala tanteraka ianao sao hiafara amin'ny aina tokoa,....fa saingy, raha miala ianao na dia vita divorce aza dia afaka manmbady fa tsy afaka madray kominio any ampiangonana intsony raha mbola velona ny vadinao, raha manambady ianao nefa te handray kominio dia maka render vous am pretra eo antoerana maka hevitra raha tena tsapanao fa avy aminy ny fahadisoana rehetra, afaka mandeha mihaona mivantana amin'ny Eveka koa ianao milazalaza ny fandehany rehetra, izy no afaka manome alalana anao hoe afaka madray kominio ve sa tsy afaka fa kosa izy tsy afaka manafoana ny sakramenta izany hoe tsy afaka manao mariazy fanindroany ianao.... raha tena tsy tafavoaka ireo dia mbola misy ny atao hoe tribunal ekleziastika ny ao am katolika, afaka mijery pretra manana fahaizana mikasika ny droit canon ianao atao avocat, ....
mitovy ny cas tsika fa ny mampiavaka atsika zah tena naka "pére spirutiel" mitsy talohan'ny nialana ny tokatrano satria diso nijaly loatra, ary nanaporofo fa tsy avy amiko ny naha rava ny tokatranoko fa avy amin'ny fijangajangany sy ny fandaozany ny tokatrano, zah mbola tsy manambady ankehitriny satria tsy te hanao tokatrano maso, tsy afaka mandray kominio aho raha vao miara-mitoetra am lehilahy, de mbola eo ampandinihana lalina hoe hiditra am dingana manaraka ve (tribunal ekleziastika), ny divorce nay efa vita tanteraka
Date: 15 novembre 2017 - 14:45
Matio 5: 32
Izay rehetra misaotra ) ny vadiny afa-tsy noho ny fijangajangana ihany dia mampijanganjanga azy.
) misaotra = misaraka.
>>> Izany hoe ny fijanganjangana irery ihany no antony azo isarahana amin'ny vady.
>>> Raha mijanganjanga izany ny andaniny, dia afaka misaraka ny ankilany.
Aza manaiky adalain'olona amin'ny "dogme" noforonin'olombelona, fa vakio ny Baiboly. Afaka misaraka ianao raha mijangajanga ny vadinao.
Par: Oadray marina
Date: 16 novembre 2017 - 03:31
Tsy katolika aho fa gaga @ny hevitra diso maro.
Na katolika enao na protestante na évangélique na secta...dia TSY MISY MANAIKY NY FISARAHANA ZANY raha efa vita tso-drano teo @alitaran'Andriamanitra.
Tsy avy @ Andriamanitra ny Fisarahana fa ny Devoly no manome saina Hisaraka zany.
Mahaiza mieritreritra tsara alohan'ny handraisana fanapahakevitra fa Andriamanitra TSY AZO IVAZIVAZIANA.
Date: 16 novembre 2017 - 07:17
Ny fanambadiana dia fifanekena: olon-droa nifanaiky hifankatia,hifampitantana, hifanasoa. Toy ny fifanekena rehetra, mamatotra ny andaniny 2. Ka raha misy ny andaniny 1 mivadika @ fifanekena, rariny sy hitsiny raha mandrava ny fifanarahana ny ankilany. Tsy misy sahala ny hoe:"toy ny lamban'akoho..." sy ny hoe"mahareta hatramin'ny farany!". Fa miara-miharitra no tokony ho izy. Marina fa misy fiafiana ny fanambadiana, kanefa fiafiana hiarahana io; fa tsy hoe ny iray mampiafy dia ny iray miafy!! Izany hoe: raha efa tsy misy fitiavana avy @ ny andaniny 1, rariny raha misaraka ny ankilany.
Date: 16 novembre 2017 - 07:53
Tsy misy hoe katôlika sy protestant zany. Ny hoe sakramenta dia teny frantsay, fa @ teny malagasy dia fanamasinana. Izany hoe mitovy foana io na katôlika na protestant.
Par: te hahalala
Date: 25 novembre 2017 - 21:43
Misy meilleure amie-ako ; vevavy aho no manoratra ; niara-lehibe izahay roa , nifampizara ny fiainana rehetra , niarakaraka nivoaka nanambady ,nifamipizara ny fitaizana zaza sns rehetra ;ka izay no mahatonga ahy mba te hahalala ; eo amin'ny 20ans de mariage eo zahay roa amin'izao ,kanefa an-dalana mangataka divorce izy ,izay laviko moa izany nohon'ny alaheloko azy hoe efa mba tody hatreto ihany izy roa ,nefa refa tena mandinika ilay fiainany aho dia toa te hankasitraka ny hanaovany an'izany ihany ,ka ty haiko intsony izay hevitra mety sy marina hatoro azy refa sendra tafaresaka izahay ; noho ireto antony ireto;
- vita fanamasinana mariazy katolika zareo ,zaho koa torak'izany eto no tena mahasahirana ahy am fanoroana azy satria haiko tsara ny hasin'ny fanambadiana sy fanamasinana ary ny lalàna katolika io
-tany aloha nandeha tsara ny fiainana ;nijangajanga tampoka rangahy ary tsy mba fijangajangana tsotra fa dia saika hiara-hipetraka hanao tokantrano ivelany niaraka tamina mpivaron-tena mihintsy no tratra ,misy porofo sy tsy afaka nandà io vadiny io ,
-saika hisaraka izy tamin'izany sainga resy lahatra ny hasin'ny tokantrano; ny fitiavana sns....ny vadiny koa moa nifona ny hamelana ny helony sns...
- nitohy tsara sy niharina be mihintsy aza ny fiainan zareo taorian'io ary narahina fahatongavan-jaza fahatelo mihintsy izany ;
- Ankehitriny anefa ; dia nolazainy fa niova be ndray rangahy (lainga; ny vola,oma,fanambaniana sns.. ,ary efa taona 3 na 4 teo no niainany izany indray
no niainan ndry zareo indray io fiovàna niha ratsy io indray ;
Milaza izy fa hametraka fangatahana divorce satria mahatsiaro afa-nenina ny amin'ny vadiny ,ary mahatsiaro mihintsy fa juste nataon ndrangahy fitaovana fotsiny nentina nanarenany ny fiainany nohon'ny hatsaram-pony sy ny fahendreny fa araky ny fahitany dia tsy nisy fitiavana azy mihintsy io vadiny io raha ho toy izao no hitan ndRangahy fa mendrika ny effort rehetra nataony hampiverina indray ny fiainan-tokantrano ka tapa-kevitra tanteraka izy ap 20ans de mariage fa hisaraka,
-nahitany porofo indray fa manan'olon-kafa rangahy ary toa hoe niteraka ivelany mihintsy;
Tsy haiko intsony koa izay holazaina aminy refa ilay sendra tafaresaka arahin-dranomaso aminy ka izay no hangatahako hevitra aminareo ny hoe ny toy izao ve
- Aoka tsy ho sarahin'olombelona izay nakamban'Atra ? fa dia hoe entina amim-bavaka hatrany ny fiainana dia miharitra ao ? sa
- Aleo miala rehefa afa-nenina ?
Marihiko fa -efa tsy miray chambre intsony zareo herintaona izay HONO ,ramatoa no niala ,ary toa ty nampaninona an-drangahy izany ;
-Ny hiaro ny fananana iombonana izany tsy ho lasan'ny hafa no tena mahatonga ilay namako hiala araky ny teniny tsy hahafahan ndrangahy hanao testamenta miafinkafina ambadika any ,fa tSy nasiany resaka fitiavana y tokantrano sy ny ankizy sns intsony,
Ahoana ny Situation toy izay ry zareo ho antsika rehetra ny fanontaniana ;
Hanaraka ny lalànan'Atra no tokony harahina sa ny lalanàn'olombelona ???????
Date: 25 novembre 2017 - 22:06
Ka efa mazava be ilay clause voasoratra anaty baiboly hoe "afa-tsy noho ny fijangajangana" ihany.
Rehefa fijangajangana no mandoto ny fanambadiana izay masina dia aleo misaraka...Manitsakitsa-bady, mivaro-tena na miaraka @ mpivaro-tena, manao firaisana amin’ny olona tsy vadiny, maloto daholo izany ka mahatonga ny fanambadiana ho tsy misy hasiny intsony
Date: 27 novembre 2017 - 08:18
Raha arahina ara-bakiteny ny baiboly: mahazo mampirafy ny lhl. Toa ny vhv ihany no lazaina ho mijangajanga. Ny kristianina no nampiditra ny monogamie (vady tokana) ary nametraka ny fanambadiana ho sakramenta izany hoe misy fototra masina.
Ny fanambadiana dia fifanarahanan'olon-droa samy manaiky ho voafehin'ny lalana tokana :mifamelona, mifampitsinjo, "mijanona aminao irery"... Rehefa tsy manaja ny fifanekena ny iray, manan-jo ny an-daniny hisaraka.
Rehefa tsy misy intsony ny fitiavana, inona intsony no mbola iarahana?
Raha tsy mipetraka ny resaka zanaka, inona moa sisa ny rohy mamatotra?
Ny fanana iombonana? takio ho voaharo ny zon' ny zanaka nateraka. Dia avao ny tokony ho anjaranao, dia izay hanaovany ny azy...!
Date: 27 novembre 2017 - 08:24
Rondro> aiza anaty baiboly no misy ara bakiteny hoe mahazo mampirafy ny lehilahy
Andriamanitra no namorona ny fanambadiana voalohany fa tsy ny olombelona izany mihitsy azafady
Date: 28 novembre 2017 - 09:40
hono oa<< Firy ny Vadin'i Jakob? David? Salomon? .... Firy ny olona niterahan'i Abrahama...? Tsy nisy nilaza hoe nijangajanga izy ireo!!!
Date: 28 novembre 2017 - 10:22
Rondro///Jesosy raha nanontanian'ny olona ny @ namelan'i Mosesy ny olona hisara-bady dia nohon'ny hamafin'ny fonareo hoy izy fa hatr@ voalohany lahy sy vavy no nataon'A/tra. Rehefa tonga i Jesosy dia ny hanatsara ny lalana efa napetrak'A/tra no nataony, nisy ny zavatra niova. Paoly dia manambara fa ny mpitandrina sy ny diakona dia tokony hanana fitondra-tena tsara dia anisan'izany ny vady tokana. Noho izany ny tena kristianina marina dia tokony hanambady tokana.
Ninia tsy nijery ny andron'ny tsy fahalalana A/tra tao ao @ testamenta taloha.
Date: 28 novembre 2017 - 12:25
Rondro> ahoana koa izany raisonnement nareo izany e?angaha raha nanana vady maro ireo olona ireo dia midika hoe mahazo mampirafy e? Tsy hainao nga ny nahazo an'i David sy Salomon rehefa nijangajanga sy nanaraka ny andriamanitry ny vadiny marobe?
Misy fiantraikany daholo ny choix rehetra Ary izay no aseho ao anaty baiboly ao.
Jereo ny vokatry ny niarahan'i Abraham t@ mpiasany.
Fa Atra mamindra fo rehefa mifona sy miverina Aminy. Adama sy Éva no mpivady voalohany, Ary vady sahaza no nomena an' iAdama fa saingy voafitaky ny ratsy izy ireo.
Date: 28 novembre 2017 - 15:26
Ary Jakob nampirafy an'i LEA sy Rachel , ary mbola niteraka t@ mpiasa vavy 2 no loharanon'ny firenena Israël.
Salomon no hobian'ny baiboly t@ fahendreny!
Tsy nilaza mihitsy aho hoe : tsara ny mampirafy ; mitatitra ny zava-nisy ara-tantara fotsiny aho. Izay ny tantara! Izay tsy azo lavina!! Tsy hoe satria zava-nisy tao @ ireo olo-malazan'ny baiboly dia tsara! Tantara ! Tantara! Aza fanatika ka mitroatra raha vao kasihina ny baiboly.
Raha namaky tsara ny voasoratro ianareo, dia hoy aho : ny kristianisma no namaritra ny monogamie, izany hoe: misy fototra masina. Vakio tsara ê!
Date: 28 novembre 2017 - 23:23
Tena sûre vé i Rondro fa mahazo tsara ny tantara ao anaty baiboly resahinao io?
Ny tantaran'i Jacob anie nisy fitaka nataon'i rafozany sa tsy hainao izany???
Efa nolazaiko teo aloha hoe ireo mpanjaka sy olo-malaza anaty baiboly ireo dia nizaka ny choix nataony daholo.
Misy message Tiana ampitaina amintsika @ izany rehetra izany satria izay no maha testament an'io baiboly io.
Tsy olombelona namaritra ny vady tokana sy sahaza fa Ilay namorona ny fanambadiana
Date: 29 novembre 2017 - 08:26
Tssss!!! Koa maninona no tsy "nisaorany" i Léa (izy ts'inona voafitaka!). Na naninona no tsy nionona teo fa lasa nampirafy indray? Ary indrindra naninona no nanaiky nandry tamin'ireto mpiasavavy???
I Salomon (izay nanana vady marobe) no deraina hoe mpanjaka manan-karena indrindra (tsy fitahian'Andriamanitra ve izany?)
Tsy mahafantatra ny ao ambadiky ny tantara aho , fa ny zava-nisy sy nitranga no hitako. Aiza no misy fanamelohana an'i Jakob na Salomon? Ny fanamelohana an'i David naka ny vadin'i Uri no hitako.
Date: 29 novembre 2017 - 10:28
Rondro >>andana re mamerina mamaky baiboly fa tsy mahafaty antoka izany à!
Misy promesses nataon'Atra t@ lignée an'i David sy depuis Abraham izay tanteraka @ Irèny fitahiana ny taranaka ireny na dia nisy foana aza ny hadalan'Olombelonà. .
Jakoba dia nandainga tamin’ny fotoana tokony hitsofan-drano an’i Esao izao ohatra
Misy ihany koa anefa ny sazy arak'izay fahotana vita
« Fa izay afafin’ny olona ihany no hojinjany
Fa ny tombony ho an'ny mino dia raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsi-fahamarinana rehetra
› Grève SNCF: trois TGV sur cinq, un TER et Transilien sur deux mercredi
› Voitures électriques: la France veut multiplier par cinq les ventes d'ici 2022
› Manifestation à Paris: echauffourées avec des forces de l'ordre, sept interpellations
Débat sur la sécurité à l'approche des lois européennes sur la protection des données
› Le patron de Facebook attendu de pied ferme au Parlement européen
› Les compétitions du jeu vidéo "Fortnite" dotées de 100 millions de dollars